Filtrer les éléments par date : mercredi, 27 février 2019
mercredi, 27 février 2019 20:58
Ministeran'ny raharaham-bahiny: Mpiasa ampolony maro ho very asa
Izay no ho vokatry ny fampiharana ny naoty laharana 19/128 AE/SG/DRH/SAP tamin'ny 22 febroary 2019, manafoana ny fifanarahana arak'asa an'ireo mpiasa ECD (Emploi de Courte Durée) eo anivon'ity ministera ity.
mercredi, 27 février 2019 14:18
Ambanja: Nidoboka am-ponja ireo nanafika teratany sinoa
Nidoboka am-ponja vonjy maika avokoa omaly rehefa natolotra ny Fitsarana ireo olona 6 izay voarohirohy tamin'ny fanafihana mitam-basy ilay teratany sinoa tao Ambanja ny alin'ny 19 febroary 2019 teo.
Ny ampitson'io ihany dia efa nisy voasambotra ireo olon-dratsy, izay mbola nahatratrarana lelavola 32 tapitrisa Ariary tao anaty kitapony raha iny avy naka ny anjara volany tany Ambilobe ka hody tao Ambanja niaraka tamin'ny moto.
mercredi, 27 février 2019 14:01
Miezaka mampiroborobo ny fizahantany ato aminy i Maroantsetra raha ny ranomasina sy ny renirano no tena vavahady hidirana aty.
mercredi, 27 février 2019 13:53
Spaoro iraisan'ny ministera: Mianto-tena ny mpiasan'ny Primatiora
Nanapa-kevitra ny Praiminisitra fa tsy handany vola amin'ny resaka ASIEF (Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires) intsony, tsy hamoaka volam-panjakana momba izany, koa ny mpiasa no nasaina mandoa vola 12.000Ar isan'olona ho fandraisana anjara.
Betsaka ny mpiasa mimenomenona, indrindra ireo tsy mpanao spaoro.
mercredi, 27 février 2019 13:50
Trangam-piarahamonina: Zazalahy kely 11 taona avy Andapa hita aty Sambava
Andriamampianina Najah, teraka ny 08 jona 2008 tao Andapa, mpianatra ao amin'ny EPP Andapa Sud, taona faha-7 hiatrika CEPE amin'ny faran'ny taona, zanak'i Haja Honoré Jhone Love sy Rakalady Christine ity zazalahy nivenjivenjy ity.
Antony nandosirany ny tokantran-dRay aman-dreniny, hoy izy nitantara, dia nandritra ny fotoana fakan-drivotra raha iny nilalao mifanenjikenjika niaraka tamin'ny hazo kely iny izy ireo, dia tampoka teo nahavoa ny namany ny hazo teny an-tanany ka tafatsofoka tamin'ny oron'ilay mpianatra namany ilay hazo kely ary naratra.
Nentin'ny tahotra i Najah ka ny hevitra hitany dia nandositra, ary izao tonga aty Sambava efa hatramin'ny alatsinainy 25 febroary 2019 tolak'andro.